Wararka - Hawlaha safarka ee shirkadda
Dhaqdhaqaaqa shirkadda > Hawlaha safarka ee shirkadda
Si loo nasto loona yareeyo cadaadiska, kor loogu qaado isgaarsiinta iyo xiriirka ka dhexeeya asxaabta isla markaana kor loogu qaado saaxiibtinimada, shirkadeenu waxay abaabushay safar dheer oo ay ku tagayso Heyuan markay ahayd Sebtember 15th, 2018. U kaxee si aan ula kulano dhulka barakaysan ee harada.
U oggolow shaqaaluhu inay hagaajiyaan isgaarsiinta iyo fahamka quruxda dabiiciga ah ayna xoojiyaan wadajirka kooxda. Marka la soo koobo waxqabadkan, waxaan ku raaxeysaneynaa oo aan hagaajineynaa jirkeena iyo maskaxdeenna, innagoo abuureyna jawi midaysan, firfircoon oo horumar leh.
Hawsha waxaa abaabulay isla markaana dhiirrigeliyey waaxda maamulka iyo shaqaalaha. Waaxdu waxay si faahfaahsan u qabatay hawlgelinta geynta safarka ka hor. Laga soo bilaabo hoyga, cuntada, gaadiidka illaa tirakoobka shaqaalaha, habeynta safarka iyo ogaysiiska dhacdada, wax walba way fiicnaayeen. Faahfaahin kasta waxay isku koobtay dadaalka Waaxda iyo rabitaanka qotada dheer ee ah in shaqaalahu ka dhigaan kuwo baashaala oo waqti fiican hela.
9:00 subaxnimo ee Sebtember 15, shaqaalaha dhammaan waaxyaha ayaa isugu soo ururay iridda shirkadda si ay u tirakoobaan tirada dadka oo ay u fuulaan gaariga si ay u kala horreeyaan, waxayna guda galeen safarkeenii wanaagsanaa. Intii aan jidka ku soo jirnay, aad ayaan u faraxsanayn, qaar iyaga ka mid ah ayaa sugi kari waayey inay toogtaan muuqaalka quruxda badan ee daaqadda bannaanka ka ah, qaar waxay ka hadlayeen howlaha qoyska ee cirka, saddexda saacadood ee ay socdeenna markiiba waa lagu soo afjaray qosolkii qof walba. Waxaan nimid maanka wanlvhu ee maskaxdeena. Markay ahayd 12:30, waxaan gaarnay hoteelka, waxaanan isugu nimid maqaayada. Intii lagu guda jiray casho sharafta, qof walba aad ayuu u faraxsanaa, oo isla sheekaysanayay isla markaana muujinayay qalbigiisa.
Qadada ka dib, waxaan isugu nimid inaan bilowno safar dhab ah oo Heyuan ah. Wadada ugu weyn ee dalxiisku waa Heyuan, Gobolka Guangdong, halkaas oo aan ku booqan karno jasiiradda harada ugu weyn ee dabiiciga ah ee Heyuan, wanlvhu Jinghuayuan.
Wax yar ka dib waxaan gaarnay meeshii aan u soconay, anagoo u kala horayna sidii la rabay, waxaanna ka soo qaadnay sawir kooxeed irridda aagga xeebta Wanlv Lake. Qaar ka mid ah router-yada 4G iyo 4G modules ayaa heesay heeso, cod dheer iyo mid cadba leh, iyagoo hawada ka dhex dhawaaqaya; Qaarkood ma sugi karaan inay baxaan si ay ugu raaxaystaan ​​caadooyinka gaarka ah. Kor u fiirsiga, cirku waa buluug, cawska cagaaranna wuu cagaaran yahay, daruuraha iyo ubaxyada ayaa qurux badan, udgoonka duurkuna waa udgoon yahay; Si hufan oo cad bay u iftiiminaysaa muuqaalka aan dhammaadka lahayn ee harada, sida rucubyo buuro ah, biyo gunuunac ah. Waa dhul barakaysan xagaaga., Iyagoo ku tiirsan muuqaalka dabiiciga ah ee quruxda badan iyo xayawaanka hodanka ah iyo kheyraadka dhirta ee harada Wanlu, barta muuqaalku waxay diiradda saaraysaa bey'ada dabiiciga ah, jardiinooyinka, keymaha, dhagaxyada iyo boholaha qalaad. Qaadashada quruxda iyo sheekooyinka sheeko xariirka ah ee lagu sharaxay sheeko xariiqa ugu weyn, goobaha qurxoon iyo mashaariicda sida Baihua square, Baihua Road, Lvxiang Pavilion, rumengyan, doocui Valley, godka Hongyan, Qihong Pavilion, wadanka inanta, baarashuudka dhaadheer, iwm ayaa la dejiyey, Waa goob dalxiis oo dhammaystiran oo isku dhafan dalxiis dalxiis, dalxiis kaynta iyo astaamo gaar ah oo dhiirrigeliya alaabooyinka dalxiiska. Ku raaxeyso heesta baaxada weyn ee Hakka iyo qoob ka ciyaarka. Jasiiradda biyaha ku jirta - jasiiradda jeclayd, oo ay ku wareegsan yihiin biyo cagaaran, midabka biyuhu saddex jeer buu isbeddelaa maalintii. Markaad ka gudubto buundada Xianyuan oo aad ku dul mushaaxayso jasiiradda, waxaad dareemi kartaa xasilloonida buuraha, xasilloonida dhulka iyo jilicsanaanta biyaha. Waad kali fadhiisan kartaa meel cidlo ah ama waxaad ku casuumi kartaa asxaabta inay ku ciyaaraan chess. Waxaad dareemi doontaa deganaan iyo xasillooni badan, sida haddii aadan dhimaneyn!
Qosolkii, safarkii si dhakhso leh ayuu ku dhammaaday. 4G router iyo 4G module, waxaan isugu nimid iridda goobta muuqaalka ah, waxaan aadey makhaayada si aan u casheyno, cashada kadib, waxaan aadeynaa gaopugang Ketianxia dalxiis caalami ah, soo galitaan, goob madadaalo oo madadaalo ah oo isku dhafan deganaansho, firaaqo iyo madadaalo adeegyada sare ee ganacsiga. 20: 30 - barashada bilaashka ah ee guga kulul ee Ketianxia Crystal (30-35 barkado guga oo kulul): wadar maalgashi dhan 300 milyan yuan, waa goob guga oo aad u wanaagsan oo leh mowduuc ah "dhaqanka qubeyska adduunka", sheeko iyo naqshad gaar ah , qaab quruxsan oo xarrago leh, isku dhafan oo muuqaal dabiici ah iyo muuqaal dhaqameed, waxaana ka qeyb geli kara dalxiisayaasha afar xilli oo sannadeed ah. Tayada biyaha guga kulul waa mid cad oo aan dhadhan lahayn, heer kulkuna waa 36 ~ 68 ℃ ° C. Waxay iska leedahay guga kaalshiyamka ah, kaasoo hodan ku ah kaarboon laba ogsaydhka bilaashka ah iyo walxaha raadraaca; Meelaha kulul waxay u qaybsan yihiin: Jarmalka Pavilion, aagga qubayska Shiinaha, aagga maydhashada Yurub iyo Taambuugga Thailand. Sidoo kale ku qalabaysan aduun biyo-xayawaan qiroweyn iyo adduunyo riyada barafka.
Isla mar ahaantaana, nasashada iyo jahwareerku ma aha oo kaliya inay xoojiyaan xiriirka dareenka ee ka dhexeeya qof walba, laakiin sidoo kale waxay xoojinayaan wadajirka shirkadda. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale ka tarjumaysaa qaabka shaqada ee shirkadda ee daryeelka shaqaalaha iyo isku darka shaqada iyo nasashada.
Duufaanta darteed, hal habeen ayaan joognay. Maalintii saddexaad, waxaan isugu nimid quraac subaxdii annagoo faraxsan ayaan Shenzhen ku laabannay. Ku noqo Shenzhen si ammaan ah safarkiina waa dhammaaday.
Weli waan xasuusan karnaa safarkii cajiibka ahaa, qosolkeenuna wali wuxuu ku soo noq noqonayaa dhagaheena. Socdaalkan wuxuu fursad kuu siinayaa inaad isbaratid oo aad isbaratid. Inta hawshu socoto, waxaad arki kartaa dhinac kale oo noloshaada ah. Waxaan ku raadjoognaa saxsanaanta iyo feejignaanta shaqadeena. Laakiin nolosha, had iyo jeer waxaan nahay dhalinyaro si aan ugu raaxeysto nolosha. Waan jecel nahay shaqada waana jecel nahay nolosha. Labaduba waa is kaabayaan. Safarka ay shirkadu abaabushay waa xiriir wanaagsan oo udhaxeeya shaqada iyo waqtiga firaaqada, nasashada jireed iyo maskaxeedna waa soo uruurinta xoog si loo maalgaliyo shaqada mustaqbalka. Sababta ay hawsha oo dhami guul ugu soo hoyatay ayaa ah mid aan laga sooci karin tixgelinta taxaddar leh ee hoggaamiyeyaasha iyo tixgelinta dhammaystiran ee dhibaatooyinka, laga bilaabo xulashada horyaalnimada iyo go'aaminta marinka. Faahfaahin kasta waxaa loo tixgeliyaa si taxaddar leh, si aan waqti fiican ugu helno. Soo noqoshada safarka waxay ku dareysaa dareen soo dhawaansho iyo aqoonsi shirkadeena. Waan jeclahay shirkadan iyo qoyskan weyn!
Alaabooyinka waxaa ka mid ah serial server, Lora module, module WiFi, moduleka meelaynta GPS, moduleka meeleynta Beidou, modem 3G / 4G modem, GPRS DTU, 3G / 4G DTU, warshadaha 3G / 4G router wireless, gaariga WiFi, router isku dheelitirka culeyska, 4G warshadaha kombiyuutar, M2M madal daruur iyo qalab kale iyo softiweer.
Dhaqanka Shirkadeed: Zhilian IOT waa mid ay ku kalsoon yihiin oo ay ku aqoonsan yihiin macaamiisha kooxdooda xirfadleyda ah, alaab tayo sare leh iyo adeeg dhameystiran.
Qiimaha Zhilian IOT: iskaashi xirfadeed, sharaf, hal-abuurnimo, qanacsanaanta macaamiisha. www.szchilink.com
Guddiga circuit PCB tayo sare leh, iyadoo la isticmaalayo qaybaha warshadaha
Awoodda korantadu waxay qaadataa naqshad ballaadhan
Ethernet wuxuu korsadaa dekedda shabakadda gigabit oo leh difaac elektromagnetic ah
Awood xoog leh oo ka hortag ah
Hawlgalku waa mid fudud, habboon oo sahlan in la isticmaalo